Utyalomali-Shineon Technology Co., Ltd.
I-GSR Ventures yingxowa-mali yengeniso etyale imali ikakhulu kwiinkampani zetekhnoloji yokuqala kunye nenqanaba lokusebenza eChina. I-GSR okwangoku ine- $ 1 yezigidigidi eziphantsi kolawulo, iindawo eziphambili ekugxilwe kuzo zibandakanya i-semiconductor, i-Intanethi, i-wireless, imithombo yeendaba kunye netekhnoloji eluhlaza.
I-Capital Light Venture Capital (i-NLVC) yeyona nto iphambili e-China ejolise kwimali eyinkunzi ejolise kumathuba kwinqanaba lokukhula. I-NLVC ilawula malunga ne-US $ 1 yezigidigidi kwimali eyinxalenye yokuzibophelela ngeemali ezi-3 zeedola zaseMelika kunye nezezimali ezi-3 zeRMB. Iinkampani zayo zephothifoliyo zithatha i-TMT, ukucoceka kweTekhnoloji, ukhathalelo lwezeMpilo, ukuThengisa okuPhambili, uMthengi njalo njalo.
Amaqabane amakhulu e-IDG ajolise ikakhulu kutyalo-mali kwiiprojekthi ezinxulumene ne-VC kunye ne-PE e-China. Sijolise ikakhulu kwiinkampani ezihamba phambili kwiimveliso zabathengi, iinkonzo zefranchise, i-intanethi kunye nokusetyenziswa ngaphandle kwamacingo, imithombo yeendaba emitsha, imfundo, ukhathalelo lwempilo, amandla amatsha, kunye namacandelo emveliso aphambili. Sityala imali kuwo onke amabakala enkampani yobomi ukusuka kwinqanaba lokuqala ukuya kwi-IPO yangaphambi kwexesha. Utyalomali lwethu luqala kwi-US $ 1M ukuya kwi-US $ 100M.
IMayfield ifunyenwe yenye yeenkampani eziphambili zotyalo-mali kwihlabathi liphela, iMayfield ine- $ 2.7 yezigidigidi eziphantsi kolawulo, nangaphezulu kweminyaka engama-42 yembali. Ityale imali ngaphezulu kweenkampani ezingama-500, ikhokelela kwii-IPOs ezingaphezu kwe-100 nangaphezulu kokudibana kunye nokufunyanwa. Amacandelo aphambili otyalo-mali abandakanya ushishino, uMthengi, iTekhnoloji yezaMandla, iTelecom kunye neeSemiconductors.